Fanabeazana Ara-Miaramila ao Korea Atsimo : Dimy Ny Maty Ka Mbola Ilaina Ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2013 16:10 GMT
Mpianatry ny Lisea dimy no maty an-drano tao amin'ny toby iray amoron-dranomasina filasiana tao Korea Atsimo, izay niteraka ny adi-hevitra momba ny fahamaroan'ny toera-pilasiana miendrika fanazara-tena miaramila sy ny fahatsiarovana ny kolontaina ara-miaramila nananan'i Korea.
Tany atsimon'ny faritanin'i Chungcheong, mpianatry ny lisera dimy no maty nandritra ny filasiana ara-miaramila telo andro izay naneren'ny mpanofana hanaisoran'ny mpianatra ny akanjo aro-aina sy hitsorahany any an-dranomasina tanatin'ny takariva. Tamin'ireo mpianatra 23 tratran'ny onja mahery, dimy no tsy namaly ny antso fa hita kosa ny fatiny ny ampitso.
Talohan'ny fandevenana ofisialy [ko] notontosaina tamin'ny 24 jolay 2013, namoaka lahatsary fohy maneho ny fiaraha-miory tao amin'ny Youtube ny mpiara-mianatra tamin'ireo niharam-boina :
Nahatsikaritra ny polisy taty aoriana fa nisy mpanofana maromaro tsy manana mari-pahaizana ho amin'izany nantsoina hiasa vonjimaika mandritra ny vanim-potoana mafana maha-betsaka ny asa. Ankoatra izany, nampiasa anara-tobin-tafika an-dranomasina koreana tsy nahazo alalana ilay toera-pilasiana, na dia tsy manana fifandraisana aminà vondro-tafika aza ry zareo.
Na dia niompana tamin'ny fitsikerana ny goragora sy ny fomba fanaon'ny toera-pilasiana tsy nahazoana alalana aza ny fanehoa-kevitra eo noho eo, dia naneho ny ahiahiny amin'ny fibahanan'ny kolontsaina ara-miaramila eo amin'ny fanabeazana koreana izay manitsakitsaka ny fahaiza-mamorona eo amin'ny mpianatra sy ny mahaolon-tokana azy ary manohintohina ny maha-olom-pirenena mahatapa-kevitra sy tompon'andraikitra azy eo amin'ny sehatry ny demokrasia ny bilaogera sy ny mpisera Twitter.
Ny filasiana ara-miaramila no iray amin'ny zava-panao malaza indrindra amin'ny vakansy ho an'ny sekoly koreana ary ny ‘Gyoryeon‘ [ko], na ny fanazara-tena ara-miaramila ho an'ny ankizy, no iray amin'ny taranja tsy maintsy natao ho an'ny mpianatry ny lisea nandritra ny taompolo telo. Navarina ho taranja azo atao na tsia izy io tamin'ny 1997 ary nofoanana [nanjavona] tamin'ny fomba ofisialy [ko] tamin'ny taranjam-pianarana vao tamin'ny herintaona monja.
Sary toera-pilasiana ara-miaramila iray ao Korea Atsimo. Tsy misy ifandraisany amin'ilay toby tompon'antoka tamin'ny loza. Saripika mpisera Flickr @fast8000 (CC BY-NC-SA 2.0)
@blu_pn: Taorian'ny loza nitranga tao amin'ny toera-pilasiana izara-tena ara-miaramila, maro dia maro tokoa ireo nampiseho ny fivarahontsany manoloana ireo toera-pilasiana ara-miaramila sy ny fifehezan-tena atao amin'ny alalan'ny fanazara-tena henjana dia henjana. Saingy tsaroanareo ve? Fony aho mbola zaza, nahazo fanaraza-tena ara-miaramila antsoina hoe ‘Gyo-ryeon’ aho izay ao anatin'ny fanabeazana ahy ara-panjakana. Ary rehefa maraina dia milahatra tahaka ny any amin'ny miaramila ary manao arahaba ara-miaramila ny talen-tsekoly isika mpianatra.
Manoritsoritra ny tantara lava [ko] amin'ny kolontsaina ara-miaramila tao amin'ny fanabeazana koreana moderina ilay bilaogera mavitrika Impeter:
Tamin'ny 1969 [naotin'ny tonia: ambavahoanan'ny hiady indrindra i Korea Atsimo sy Korea Avaratra tamin'izany] nataon'ny governemanta ho taranja tsy maintsy atao ny ‘Gyoryeon’ mba hanentanana ny olona ny lafiny fiarova-pirenena sy hiomanana tsara kokoa raha misy ny ady. Tsy nieritreritra lavitra ny ankamaroan'ny mpianatra fa nanaiky azy ho tahaka ny taranjam-pianarana any an-tsekoly, fa rehefa tena mieritreritra ny momba izany ianao, dia nampihoron-koditra ihany ny toe-draharaha an. Ahafahana mitaratra izany fa efa nanana eritreritra ny handefa hatramin'ny mpianatry ny lisea eny ambava ady ny governemanta raha nipoaka ny ady. Koe efa nanao izay haha-miaramila ny mpianatry ny lisea ry zareo, dia nanomboka nampiditra toe-tsaina miaramila ny sekoly ary saika notanterahina tany avokoa ihany koa ny fomba fanasaziana ara-miaramila […] Ny tena olana lehibe indrindra amin'ny fanabeazantsika dia [ny finoana fa] ‘mila manoa ny mpianatra eny fa na dia ny baiko diso aza’ izay teraka nandritra ny fotoanan'ny fanjanahantany Japoney — fa navadiky fitondrana kolonialy Japoney ho zatovo miaramila ny zanaky ny fiankohonam-panjaka Chosun [nandritra ny ady lehibe faharoa] tamin'ny fampanjakana ny ara-miaramila ao amin'ny fanabeazana. Ary mbola tavela niaina ihany izany fomba izany rehefa nandray ny fahefana [hatramin'ny taompolo 1960s ka hatramin'ny taompolo 1980] , ka namela dia ny fanabeazana ara-miaramila tany amin'ny sekolintsika.
Nanoratra ity famelabelarana ity [ko] ao amin'ny bilaoginy fanabazana i Kim Yong-Taek, izay nandany ny fiainany amin'ny maha-mpanabe azy :
Misy fomba fiteny manao hoe ny tafika no mamolavola ny tena lehilahy. Misy aza ny ray aman-dreny sasany miteny am-pifaliana hoe ‘anaka, ny boay maherisetra iray tsy mitsahatra ny manvateva ny ray aman-dreniny dia lasa olona hafa rehefa nanao fanompoana tao amin'ny tafika’ [Tsy maintsy manao fanompoam-pirenena ara-miaramila roa taona avokoa ny lehilahy koreana afa-mijoro tsara rehetra] SAINGY, marina ve izany? voajanahary izany ho an'ny zaza mihanta lasa matotra kokoa rehefa nosarahina tamin'ny ray aman-dreniny. Raha misy ny tena fiovana vitan'ny tafika dia tovolahy bonaikabe iray lasa manoa miròna ho amin'ny herisetra. […] Manokatra ny fahaiza-mamorona sy ny mahaolon-tokana ny demokrasia ary misokatra ho amin'ny fifandraisana sy ny [fandraisana] tsikera, ary samy hafa amin'ny kolontsaina ara-miaramila izany. Ao amin'ny kolontsaina ara-miaramila, izay mitoetra eo amin'ny toe-draharaha farazan'izay ambivitry ny hifandona amin'ny fahavalo, tsy maintsy ananana ny tanjaka ara-nofo sy ny faharetana ary ny fomba tokana ahafahan-dry zareo ho velona dia ny fankatoavana ny fahefana ambony. Ahoana moa ny sekoly, andry iray tokony hitari-dalana ny mpianatra ho olom-pirenena manaja ny demokrasia, no hampiditra ny kolontsaina miaramila amin'ireo ankizy ireo? Fanapaha-kevitra mifanohitra amin'ny demokrasia izany ary tsy mifanaraka amin'ny fototry ny tena fanabeazana.